Steroid တစ်မျိုး Raws - AASraw pregabalin အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းထောက်ပံ့
/ဘ‌‌လော့ခ်/"Pregabalin" အတွက် category မော်ကွန်းတိုက်
၏ ရေးသားခဲ့သည် Pregabalin .
Pregabalin ဆိုတာဘာလဲ။ Pregabalin (1-148553-50) သည်ကမ္ဘာ့ဒေသအသီးသီးရှိ Lyrica အမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင်အများဆုံးရောင်းချလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်ဆေးယဉ်ပါးမှုကိုတိုက်ဖျက်သည့်ဆေးဟုလည်းခေါ်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသည်ဖမ်းဆီးရမိသည့် ဦး နှောက်၏သွေးလှည့်ပတ်မှုကိုနှေးကွေးစေသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, Pregabalin ဦး နှောက်ကိုထိခိုက် […]
aasraw blog navigation 1. Primobolan ဆိုတာဘာလဲ။ ၂ ။ AASraw သည်စစ်မှန်သော Methenolone / Primo Enanthate အမှုန့်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ （Methenolone Acetate） Primobolan raw […]
၏ ရေးသားခဲ့သည် Methenolone Acetate, Pregabalin .
Primobolan အမှုန့်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - Primobolan အမှုန့်ကိုအချို့သောအခြေအနေများတွင်ကြွက်သားများဖြုန်းတီးစေသောရောဂါများကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်ပုံမှန်အားဖြင့်သာပျော့ပျောင်းသောအခြေအနေများတွင်သို့မဟုတ်ကိုယ်ခံအားမြှင့်တင်ခြင်းသည်အကျိုးရှိသည့်နေရာများတွင်သာဖြစ်သည်။ ဤ steroid သည် Anadrol သို့မဟုတ် Deca Durabolin ကဲ့သို့သောအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုပ်ပိုးမှုမရှိပါ။ အမျိုးသားအများစုသည်အများအားဖြင့်အသုံးမများပါ။ […]
အမျိုးသမီးတွေက Primobolan (Methenolone Acetate) ယူလို့ရမလား။ Primobolan (Methenolone Acetate) ဆိုတာဘာလဲ။ Primobolan သည်ခံတွင်း anabolic steroids များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်ထူးခြားသည်။ နောက်ထပ်မသွားမီ Primobolan နှင့် Primobolan Depot အကြားခြားနားချက်ကိုခွဲခြားရန်အရေးကြီးသည်။ Primobolan Depot သည်ပူးတွဲပါသောဟော်မုန်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။